सेयर बजारमा थप क्षति हुन नदिन अब के गर्ने ? नेप्से घट्ने क्रम रोकिएन
काठमाडौं : पुँजी बजारको ओरालो यात्रा जारी रहेको छ । बजार निरन्तर घटेपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था आइसकेको छ । सुधारका काम अघि बढाइरहँदा पनि नेप्से सकारात्मक नभएपछि लगानीकर्ता मात्र होइन, सरकार तथा यसका सरोकारवाला निकाय पनि अन्योलमा परेको देखिन्छ । माघ लागेपछि बजारले आम लगानीकर्तालाई उत्साहित पार्न सकेको छैन ।
बजार घट्नुका यकिन कारण के हो ? भनेर आम लगानीकर्ता यतिबेला प्रश्न गरिरहेका छन् । तर प्रायः सबैको जवाफ उस्तै खालको हुने गरेको छ । चर्को बैंक ब्याजदर, निरन्तर थपिएको आपूर्ति अनि लगानीकर्ताको नकारात्मक मनोविज्ञान नै सेयर बजार लगातार ओरालो लाग्ने प्रमुख कारण मानिएको छ ।
यसबाहेक हाम्रो सेयर बजार सुरुदेखि नै चक्रीय प्रणालीमा घुम्ने गरेको छ । बुल र बियरको चक्र बजारमा देखिने गर्छ । सोही अनुसार अहिले बजार बियर चक्रमा घुमेको भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । यो चक्र सामान्यतयः ३ वर्ष हाराहारीको हुने गरेको विगतका उदाहरण छन् । तर यस्तो चक्रको अवधि र प्रवृत्तिका बारेमा कसैले पनि ठोकुवा गर्न भने सक्दैन ।
बजार निरन्तर घटेपछि लगानीकर्ताले राहतको प्याकेज खोजेका छन् । चर्को ब्याजदरमा सीमा, लगानीमैत्री नीति, पुँजी बजार सम्बन्धी सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ । सरकारले तत्काल थप नयाँ र उचित कदम अघि सारेर बजारलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिएको छ । लगानीकर्ता पनि सजग र सचेत हुन आवश्यक छ ।
उचित लगानी रणनीति आवश्यक हुन्छ । सबल वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना सहित लगानीकर्ता अघि बढ्नुपर्ने अनुभवीहरुले बताउने गरेका छन् । प्रविधिमा सुधार हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले सहज तथा सस्तो दरमा सेयर कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । बजार निर्माताको सुरुवात गर्नुपर्छ । मार्जिन कारोबार तत्काल थाल्नुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी वातावरण तय गर्न जरुरी छ । पुँजी बजारको दायरा फराकिलो पारिनुपर्छ । यति हुन सकेमा बजारले विस्तारै गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेप्से सूचक आइतबार १२.०५ अंकले घटेर ११२७.५३ विन्दुमा आइपुगेको छ । समग्रमा बजार १.०६% ले ओरालो लागेको हो ।
१६० कम्पनीको २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । ७ लाख ८२ हजार ४७७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका हुन् । कुल १० वटा समूहको सेयर कारोबार भएकोमा होटेल बाहेक बाँकी सबै समूहका सूचक तल झरेका छन् ।
होटेल समूह भने ११.६८ अंकले माथि लागेको छ । जीवन बिमा समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै १६०.२६ अंकले घटेको छ । वाणिज्य बैंक समूह पनि ६.७२ अंकले झरेको छ ।
कारोबार रकममा माछापुच्छ्रे बैंकले अग्रता लिएको छ । माछाको १ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक परेका छन् ।